» Journey-Assist - Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ku safarto
Journey - Caawi
Had iyo jeer u fiican waqtiga socdaalka wanaagsan
Dunida / Gobollada
Cirka iyo Hotelada
Khariidadaha wadashaqeynta leh
Ku soo dhowow boggayaga safarka Journey-assist!
Hadafkeenu waa inaan kaa caawinno abaabulka madax-bannaan safarka! Hadday tahay shaqo ama safarro waxbarasho, socdaalada mawduucyada, dukaamaysiga dukaamaysiga, booqashooyinka sawirka ama u safro kaliya ujeeddada nasashada. Halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka aad ugu baahan tahay inaad tan samayso. Laga bilaabo khariidado is-dhexgal leh oo leh soo jiidasho iyo ku dhammaashada talo iyo dib u eegis dalxiisayaal khibrad leh, oo leh warbixinno sawir iyo fiidyow ah.
Sidoo kale bogga waxaad ka heli kartaa qadar muhiim ah oo macluumaad waxtar leh oo ku saabsan dalal badan, soojiidasho iyo waxyaabo kale oo xiiso leh oo ku jira.
Gaar ahaan isgaarsiinta, bogga wuxuu bixiyaa fursad daabac maqaalladaada, la wadaag talooyinkaaga iyo hackska nolosha, ka tag ra'yi celintaada iyo sheekooyinka safarka.
Macluumaadka abaabulka safarka madaxbanaan
Meelaha safarka ugu caansan
Oceania iyo Australia
Maqaallada halkan lagu daabacay diiwaangashan soo booqda bartayada. Dabcan, qoraalkaaga ama dib-u-eegistaada sidoo kale way ka muuqan kartaa halkan. Qormooyinka ay ka mid yihiin talooyin waxtar leh, talooyin, sharaxaada meelaha xiisaha leh, dib u eegista iyo waxyaabo la mid ah. Dabcan, kahor daabacaadda, maqaallada oo dhan waxaa loo habeeyay ku habboonaanta waxyaabaha content
Si aad u abuurto daabacaaddaada, tag koontadaada gaarka ah, ama guji kaliya HALKAN 🙂
India Maldives Filibiin
Indonesia Shiinaha Sri Lanka
Kamboodiya Saaxiib Japan
Dhammaan daabacadaha ku saabsan waddamada Aasiya
7 gobol oo qurxoon oo ka tirsan dalka Turkiga
Toddobada gobol ee ugu quruxda badan Turkiga Tusmada Tusmada 7 boqolkiiba dhul balaaran ee Turkiga wuxuu kuyaalaa Aasiya, iyadoo boqolkiiba seddex ka mid ah dhulkeeda uu ku yaalo Jasiiradda Balkan ee Koonfur-bari Yurub, oo ka go'ay dalka intiisa kale Bosphorus, Badda Marmara iyo Dardanelles. Turkiga waxaa xuduud la leh Badaha Aegean, Black iyo Mediterranean waxayna leedahay xeeb dheer oo qurux badan. Dad badan ...
10 xeebood oo ugu fiican dalka Turkiga
Top 10 Xeebaha Turkiga Tusmada Tusmooyinka Turkiga waa duug soo jireen ah oo dhaqamo, dad iyo muuqaalba leh. Bariga Yurub oo dhinac ah iyo Aasiya oo dhinaca kale ah, Turkigu wuxuu qaabeeyey taariikhdiisii ​​dheerayd isagoo saamayn ku yeeshay boqortooyooyin, xiriir dhaqan iyo jidad ganacsi oo dhex mara. Dhulkeeda dabiiciga ah iyo xeebteeda ...
10-ka dalxiis ee ugu wanaagsan Istanbul Turkiga
10-ka dalxiis ee ugu wanaagsan Istanbul Tusmada Turkiga Tusmada Istanbul waa magaalo ku wanaagsan dhowrista dhaqankeeda iyo taariikhdeeda, iyaga oo ku dhex milmay magaalo xiiso leh oo in badan oo ka mid ah laga heli karo safarrada ka socda adduunka oo dhan. Waxaa la aasaasay xilligii Neolithic, Istanbul maanta waa magaalo casri ah oo weli run u ah dhaxalkeeda taariikhiga ah iyada oo ay ugu wacan tahay masaajiddeeda, basilicas iyo ...
10 jasiiradood oo ugu waaweyn dalka Indonesia
10ka jasiiradood ee ugu waawayn dalka Indooniisiya Tusmada waxa ku jira Indooniisiya waa kooxda ugu badan jasiiradaha adduunka, iyada oo aan ka yarayn 17 jasiiradood oo ku teedsan xeebta Asia Shan jasiiradood ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo waaweyn sababtoo ah baaxadooda weyn, halka inta soo hartay loo qaybiyay 000 jasiirado yaryar oo Indonesia ka tirsan. Waxaan u soo bandhigayaa dareenkaaga 30 jasiiradood ee ugu waaweyn Indonesia. toban …
10 xeebta ugu fiican jasiiradda Lombok ee Indonesia
Top 10 Xeebaha Lombok ee Indooniisiya Tusmada Mawduucyada Socdaalyaashu waxay u yimaadaan Lombok sababo badan awgood. Waxaa laga yaabaa inay rabaan inay sahamiyaan dabeecadda ama ay wax badan ka bartaan beeshan ay ku badan yihiin muslimiintu. Qaar kale waxay rabaan inay arkaan qaar ka mid ah xeebaha ugu fiican ee Lombok, qorax madoobaadka, iyo suurta galnimada urinta, quusitaanka iyo dabaasha. Waxaa jira ...
10 jasiiradaha ugu fiican Indonesia
Tusmada Jasiiradaha ugu sareeya 10 ee Indooniisiya waxay ku taalaa inta udhaxeysa Badweynta Hindiya iyo Badweynta Baasifigga waxeeyna ka sarreysaa dhulbaraha. Waddankan gaarka ah wuxuu leeyahay in ka badan 17 jasiirado kala duwan. Jasiiradaha ugu caansan sida Java, Sumatra iyo Borneo waa qaar ka mid ah kuwa ugu waaweyn adduunka, laakiin kuwa yaryar ayaa iyaguna mudan in la booqdo. In kastoo aan ...
Boqortooyada Ingiriiska Ukraine Czech Republic
Dhammaan daabacadaha ku saabsan waddamada Yurub
7 Cajiib Giriiggii Hore
7 Layaabka Qadiimiga Giriiggii Hore Mawduucyada Dhammaan dhismooyinka qadiimiga ah ee cajiibka ah ee ku yaal Griiga, in yar ayaa ka badbaaday ilaa maantadan, halka kuwa kale ay gebi ahaanba ka baaba'een aragtidii ay u qabeen burburka ka dhashay aafooyinka dabiiciga ama dadka laftooda. Xitaa dhismooyinka ka badbaada, qaybo ka mid ah qayb ahaan ama gebi ahaanba waa burbureen .. Shaqooyin badan oo dib u soo celin ah ayaa loo sameeyaa si loo ilaaliyo ...
10 meelaha ugu caansan Poland
Jadwalka Tusmada Soojiidashada ugu Caansan ee Poland Tusmada Mawduucyada ee Poland waxay ka badbaaday qarniyo colaado ah waxayna u kortay dal madaxbanaan oo lagu faano oo diyaar u ah inay qabtaan door cusub taariikhda casriga ah. Soo-booqdayaasha Poland waxay soo ogaanayaan waxa dadka deegaanku yaqaaneen muddo dheer: Poland waa waddan hodan ku ah dhaqanka, muuqaal qurxoon iyo goobo taariikhi aan caadi ahayn Haddii aad baareyso ...
Meelaha ugu badan ee fasaxa loo tago ee Griiga
Meelaha ugu badan ee Fasaxyada Fasaxyada ee Giriigga Tusmada Tusmada Giriigga waxaa loo yaqaan gogol-dhigga ilbaxnimada iyo dimuqraadiyadda, oo aan lagu xusin Ciyaaraha Olambikada ee caanka ah. Waa goob dalxiis aad loo jecel yahay oo leh dhowr meelood oo caan ah sida Santorini iyo Athens. In kasta oo goobahan nasashada ay ka buuxaan waxyaabo yaab leh oo la arko iyo ...
Kirillovka. Ku naso Badda Azov. Yukreeniyaan
Kirillovka. Ku naso Badda Azov. Jadwalka Mawduucyada ee Yukreeniyaan Iyada oo qayb ka ah isbeddellada socdaalka adduunka, waxaa la joogaa waqtigii si dhow loo fiirin lahaa waddammada aan ku nool nahay, halkii aad ku riyoon lahayd halka laga helayo hadda suurtagal ma ahan.Dadka deggan Ukraine, tusaale ahaan, waxaa jira Bad qurux badan oo Azov ah! si dhow ugu fiirso isaga gudaha ...
10 jasiiradood oo ugu waaweyn Griiga
10 jasiiradood oo ugu waaweyn Griiga Shaxda waxyaabaha ku jira Way adag tahay in si sax ah loo sheego inta jasiiradood ee ku baahsan Giriigga oo dhan. Juqraafiyayaashu waxay ku qiyaaseen inay jiri karaan inta u dhexeysa 1200 ilaa 6000 jasiirado kala duwan. Si kastaba ha noqotee, badankoodu way yar yihiin waxayna ku noolaayeen lama dagaan dhowr qarniyo ee la soo dhaafay. Giriiggu wuxuu hoy u yahay kooxo badan oo jasiirado ah, qaar badan oo ka mid ah waxay ku yaalliin Aegean iyo ...
7 jasiirado waqooyi-bari Aegean qurux badan. Griiga
7 jasiirado waqooyi-bari Aegean qurux badan. Tusmada Giriigga Jasiiradaha woqooyi-bari Aegean Islands, oo ku kala firirsan xeebta Aegean ee Aasiyada Yar, waxay sameystaan ​​jasiirado aan macquul ahayn. Jasiiraddan, kuwa ugu fog ee jasiiradaha Giriigga, waxaa lagu gaari karaa oo keliya badda ama hawada waana kuwo u qalma. Jasiiradahaani waa kuwo caan ah ...
Kenya Naamibiya Tansaaniya
Dhammaan daabacadaha ku saabsan waddamada Afrika
Meelaha ugu sareeya ee 10 ee Morocco
Meelaha ugu sareeya 10 ee loo aado dalka Marooko Tusmada Humphrey Bogart iyo Ingrid Bergman ayaa laga yaabaa inay aduunka siiyeen Casablanca, oo ah magaalada ugu weyn wadanka, laakiin Morocco wax badan ayaa laga arkaa magaaladan sharafta leh. Gumeystihii hore ee Faransiisku wuxuu siinayaa safarrayaasha fursad ay ku dhex galaan nolosha dhaqammadii hore ee Carab iyo Berber, qorrax ka soo baxa xeebta ...
10-ka goobood ee Morocco ee ugu wanaagsan & astaamaha - TripAdvisor
Jadwalka 10-ka Dalxiis ee ugu sarreeya Marooko Mawduuca Mawduuca Marooko xeebteeda iyo muuqaalkeeda xiisaha leh, oo leh xeebo dhaadheer, dekedo kalluumeysi oo xoog leh, caws cagaaran iyo Buuraha Sare ee Atlas, ayaa xiiso u yeelan kara socdaalayaasha. Ku dar magaalooyinkan boqortooyooyinka ee Fez, Meknes iyo Marrakesh, tusaalayaashooda wanaagsan ee qaab dhismeedkii hore ee Islaamka, adiguna ...
10 xeebta ugu fiican Morocco
Top 10 Xeebaha Xeebaha Moroccan Tusmada Mawduuca Marooko xeebteedu waxay mareysaa Badweynta Atlaantik galbeed iyo galbeedka bada woqooyi, taas oo macnaheedu yahay inay jiraan tiro aad u badan oo xeebo ah oo la booqdo lana raaxeysto. Waxaa jira meelo badan oo cajaa'ib leh oo loogu talogalay badmareennada xiisaha u leh iyo kuwa jecel gegooyinka diyaaradaha, laakiin maahan ...
10 macbadyada Masaarida qadiimiga ah
10 macbadyada Masaarida qadiimiga ah Tusmada Masar Taariikhdii naqshadaha hore ee Masar waxay dib ugu noqonaysaa kumanaan sano. Macbudyadii ugu horreeyay ee Masaarida waxaa la dhisay hareeraha bartamihii 4-naad ee Miilaadiga waxayna ahaayeen uun qaabab cawsduur oo dhexdhexaad ah. Macbudkii ugu dambeeyay, oo ay adeegsan jireen Masaaridii hore ujeedkiisa, wuxuu ahaa macbad ilaa qarnigii 6aad ee ...
10 meelaha ugu fiican ee lagu booqdo Namibia
Meelaha ugu sareeya ee 10 lagu booqan karo Namibia Shaxda Mawduucyada Koonfur Galbeed Afrika waxay hoy u tahay Namibia, Gumeystihii hore ee Jarmalka ee xornimada qaatay 1990 oo keliya. Naamibiya waxay caan ku tahay soosaarka dheemanka iyo dhaqanka candhuuf, iyo waliba tiro layaableh oo soojiidasho dabiici ah. Haddii fikradaada fasaxa riyada ay ka mid yihiin tacaburro badan oo firfircoon ...
Socdaalka Koonfurta Ameerika
5 gobol ee ugu quruxda badan Brazil
5 gobol ee ugu quruxda badan Brasil Shaxda waxa ku jira Brazil waa Rafaa Koonfurta Ameerika. Waa waddanka ugu weyn qaaradda iyo waddanka shanaad ee adduunka ugu weyn. Waxay hoy u tahay qaar ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu dadka badan uguna caansan; sida Rio de Janeiro, qof walbana wuu qiyaasi karaa magaaladan caanka ah ee xeebta ku taal. 5 ugu qurux badan ...
10ka dalxiis ee ugu wanaagsan & tilmaamaha Bolivia - TripAdvisor
Jadwalka Tusaalooyinka Soojiidashada Top 10 ee Bolivia Bolivia waa mid ka mid ah waddamada ugu sarreeya uguna fog adduunka, in badan oo ka mid ahna weli lama taaban waqtiga. Bolivia waxay hoy u tahay dad asal ahaan ka badan waddamada kale ee Ameerika. Dadka socotada ah, Bolivia waxay siisaa noocyo kala duwan oo khibrado dhaqameedyo kala duwan ah, dhul dabiici ah oo qurux badan iyo tacaburro xad dhaaf ah. Waxaan qiyaasayaa ...
10 meelaha ugu fiican ee lagu booqdo Ecuador
Meelaha ugu sareeya ee 10 ee Booqashada Ecuador Waxaa loogu magac daray dhulbaraha guud ahaan wadanka, Ecuador waa wadan qof walba wax u siiya. Waxay ka bilaabataa hal kun iyo badh kun oo kiilomitir oo xeeb leh xeebo aad u wanaagsan, halkaasna laga bilaabo ilaa Andes iyo kaymaha roobka ee webiga ugu qulqulka badan adduunka - ...
Safarka Bartamaha iyo Waqooyiga Ameerika
Top 10 Soojiidashada Dalxiiska Belize
Tusmooyinka Tusaalooyinka Soojiidashada Dalxiis ee ugu sarreeya 10 Bal ka fikir waddan leh xeebo kulayl ah, reef reral, qaababka godadka, duurjoogta qalaad iyo xasiloonida Caribbean-ka. Xeebta waddankan ayaa ah ta labaad ee ugu weyn adduunka, iyo burburka macbudyadii hore ayaa ku kala firirsan hawdka. Haddii aad u malaynayso in waddan noocaas ah ...
10 meelaha ugu xiisaha badan Costa Rica
Waxay ku taalaa inta udhaxeysa Nicaragua iyo Panama, Costa Rica waxay ku faantaa cufnaanta adduunka ugu badan ee dhirta iyo xayawaanka marka lagu daro muuqaalka kala duwan ee buuraha, dooxooyinka, keymaha, volcanoes, xeebta, harooyinka iyo wabiyada. Ku safridda dhexdeeda cidna ugama taranto. Waa kan qiimeynteyda 10-ka ugu xiisaha badan ...
Socdaalka Australia iyo Oceania
12 harooyinka ugu quruxda badan New Zealand
12 ka mid ah harooyinka ugu quruxda badan New Zealand Shaxda waxyaabaha ku yaal oo ku taal Badweynta Baasifigga koonfur-bari ee Australia, New Zealand waxay ka kooban tahay laba jasiiradood oo waaweyn waxayna caan ku tahay buuro dhaadheer iyo muuqaal dabiici ah oo qurux badan. Inta badan dhulka jasiiraduhu waa dhulalka jardiinooyinka qaran, gaar ahaan Jasiiradda Koonfurta, halkaas oo ku dhowaad dhammaan xeebta galbeed ee ku teedsan ...
30.10.2020 / Rem / Australia iyo Oceania, New Zealand / Faallooyinka on 12 harooyinka ugu quruxda badan ee New Zealand no
7 safarada maalinta ugu fiican ee ka socda Queenstown New Zealand
7 safarada maalinta ugu fiican ee ka socda Queenstown Tusmada New Zealand Tusmada Queenstown waa magaalo yar oo loo dalxiis tago oo ku taal New Zealand kuna taal xeebta harada Wakatipu waxayna ku faantaa aragtiyo qurux badan oo ku saabsan buuraha barafka ku daatay. Waqti aan sidaa usii fogeyn, badanaa waxaa loo yiqiin dalxiis barafka lagu ciyaaro, laakiin hadda xaaladdu si aad ah ayey isu beddeshay ...
29.10.2020 / Rem / Australia iyo Oceania, New Zealand / Faallooyinka safarada 7-da maalmood ee sarsare ee Queenstown. New Zealand no
16 gobol ee ugu quruxda badan New Zealand
16 Gobollada ugu quruxda badan Jaantuska New Zealand Tusmada Mid ka mid ah waddamada ugu quruxda badan adduunka, New Zealand ee ku taal Oceania waxaa ka buuxa soo jiidasho dabiici ah oo la yaab leh. Fulkaano badan iyo buuro dhaadheer ayaa kor uga soo fuulay xeeb dhaadheer oo qurux badan lehna dooxooyin barwaaqo ah, harooyin dhalaalaya iyo wabiyaal ku qulqulaya dhulkan barakaysan In kasta oo dhulka intiisa badan dhulku ka kooban yahay Waqooyiga Jasiiradda ...
29.10.2020 / Rem / Australia iyo Oceania, New Zealand / Faallooyinka 16ka gobol ee ugu quruxda badan New Zealand no
10 waxyaabo xiiso leh oo lagu sameeyo Napier. New Zealand
10 waxyaabo xiiso leh oo lagu sameeyo Napier. Jadwalka Tusmada New Zealand Magaalada yar ee Napier oo ku taal Jasiiradda Woqooyiga, oo ku taal xeebta bari ee New Zealand oo eegaysa Badweynta Baasifigga, waa meel aad u qurux badan oo xiiso leh oo lagu madadaalo. Napier, oo sidoo kale loo yaqaan "Art Deco caasimada adduunka", waxaa ka buuxa dhismayaal heer sare ah oo muujiya qaab dhismeed kala duwan; dheeraad ah ...
27.10.2020 / Rem / Australia iyo Oceania, New Zealand / Faallooyinka duubista 10 nashaad oo xiiso leh Napier. New Zealand no
9 waxyaabaha ugu fiican ee lagu sameeyo Nelson. New Zealand
9 waxyaabaha ugu fiican ee lagu sameeyo Nelson. Tusmada Niyuusiilaan ee Mawduucyada ah oo lagu soo dhejiyay xeebta gacanka Tasman, magaalada Nelson waxay ku taal meel quruxsan oo qurux badan oo New Zealand ah, oo ay ku hareeraysan yihiin saddex seerayaal qaran oo cajaa'ib leh Degsiimihii ugu da'da weynaa dalka, magaaladan waxaa la aasaasay sanadkii 1841, waxaana aasaasay Lord Admiral Nelson, oo isaga loogu magac daray. Magaalada, oo jacayl lagu naanayso ...
27.10.2020 / Rem / Australia iyo Oceania, New Zealand / Faallooyinka on Top 9 Waxyaabaha lagu sameeyo Nelson. New Zealand no
9 safarada maalinta ugu fiican Auckland New Zealand
9 safarada maalinta ugu fiican Auckland. Tusmada New Zealand Auckland, magaalada ugu weyn New Zealand, waxay leedahay waxyaabo badan oo la bixiyo. Waxay hoy u tahay dadka adduunka ugu badan ee Polynesia ah. Waxaa lagu dhisay dhul-gariir xoog leh oo basaltul ah - oo ah magaalada keliya ee adduunka oo kale ah. Waxay leedahay matxafyo aad u wanaagsan, marinada ugu weyn ee koonfurta iyo ...
27.10.2020 / Rem / Australia iyo Oceania, New Zealand / Faallooyinka Ilaa 9 safar oo maalinta ugu fiican ah laga bilaabo Auckland. New Zealand no
12 jardiinooyinka qaran ee ugu quruxda badan Shiinaha
12-ka dalxiis ee ugu quruxda badan Shiinaha Shaxda waxyaabaha ka kooban Jardiinooyinka qaranku malaha waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca marka aad ka fikirto Shiinaha. Si kastaba ha noqotee, waddankani wuxuu leeyahay in ka badan 200 oo jardiinooyin qaran oo gaar ah. Sanadihii la soo dhaafay, dowladda Shiinaha waxay sameysay dadaal dhab ah oo lagu ballaarinayo hannaanka seeraha qaran. Ugu badnaan in la magdhabo wasakheynta, ...
10 meelaha ugu cajiibka badan bariga Shiinaha
10 Meelaha ugu Cajiibsan Bariga Shiinaha Shaxda Tusmada Bariga Shiinaha waa duni u gaar ah. Waxay leedahay taariikh hodan ah, magaalooyinka qaar waxay ka weyn yihiin 6000 sano. Qarniyo badan, bariga Shiinaha wuxuu abuuray jawi nafta dejiya oo nasiya. Bariga Shiinaha wuxuu ka farxiyaa dhammaan dareenkaaga: laga soo bilaabo magaalooyinka biyaha qurxoon, oo ay ka gudbaan kanaallada ay ka buuxaan aayar socodka ...
10 meelaha ugu cajiibka badan waqooyiga Shiinaha
10ka Meelood ee Ugu Cajiibka Badan Waqooyiga Shiinaha Shaxda Mawduucyada Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha waa waddan ballaadhan oo kaladuwan. Cabirkeeda darteed, macquul ma ahan in dhammaan lagu wada arko hal safar, laakiin waxaa jira aragtiyo xiiso leh oo dalka oo dhan ah. Waqooyiga Shiinaha waa xulashada ugufiican ee safraya markii ugu horeysay.Waqooyiga Shiinaha waa meesha aad ka heli doonto ...
10 meelaha ugu cajiibka badan koonfurta Shiinaha
10 Meelaha ugu Cajiibsan Koonfurta Shiinaha Shaxda Mawduucyada Shiinaha iyo Mareykanku waxay isku qiyaas yihiin qiyaastii dhul isku mid ah, laakiin Shiinaha waxay ku dhowdahay bilyan dad ka badan. Ku safrida dalkan balaaran waxay noqon kartaa mid dhib badan. Laakiin way fiicnaan doontaa haddii aad si shuruud leh ugu qaybiso waddankan qaybo yaryar sida ...
Xaqiiqooyin aan inbadan la ogeyn oo ku saabsan Darbiga Weyn ee Shiinaha
Xaqiiqooyin yar oo la yaqaan oo ku saabsan Darbiga Weyn ee Shiinaha Great Wall of China. Mid ka mid ah Layaabka Cusub ee Dunida Gidaarka Weyn ee Shiinaha oo ku jira liiska Toddobada yaabab ee cusub ee adduunka, waa mid ka mid ah taallooyinka ugu caansan adduunka, laakiin waxa jiri kara waxyaabo yar yar oo aanad weli ka ogayn. Darbiga dhex mara baadiyaha Shiinaha ayaa leh at…
Waxaan u safreynaa Russia, Ukraine, Belarus
Waxa laga qabanayo Omsk. Ruushka
Waxa laga sameeyo Omsk. Tusmada Ruushka Mawduuca Ruushka Ruushka, qaybta koonfureed ee Galbeedka Siberia, halka ay ku shiraan Webiga Irtysh iyo midigtiisa midig, oo loo yaqaan Om, magaalada Omsk si raaxo leh ayey ku taal.Ka noolaanshaha Galbeedka Siberia, ikhtiyaarka ah in guri laga iibsado Omsk ayaa laga yaabaa inuu yahay midka ugu xiisaha badan. Waayo magaaladu waxay hubaal ku habboon tahay arrin ...
Ku nasashada Crimea
Ku nasasho Qormooyinka Crimea Kulan - Crimea Maxaa marka hore maskaxda ku soo dhaca marka laga fekerayo meesha lagu qaato fasaxaaga? Dabcan - Crimea! Waa maxay Crimea Marka ugu horeysa, Crimea waa taariikh hodan ah oo dhacdo leh. Genoese, Griik, Tataar, Ruush, Yukreeniyaan. Tani waxay ka dhigan tahay inay jiraan raadad taariikhi ah - qalcado, qalcado, qasriyo, ...
Tuulada loo dalxiis tago ee Dzhubga. Gobolka Krasnodar. Ruushka
Tuulada loo dalxiis tago ee Dzhubga. Gobolka Krasnodar. Tusmada guud ee dulucda kooban ee Ruushka Waxaan jeclaan lahaa inaan kaaga warramo halka caanka ah, in kasta oo ay aad u yar tahay, tuulada Dzhubga.Waxay ku taal meel aad u wanaagsan, afafka raaxada leh ee webiga isla magaca ah, ee ku socda Badda Madow. Waxay noqotay inay soo marto tuuladan kuwa u safraya Badda Madoow ee ku teedsan jidka weyn ee M-4 iyagoo maraya miiraha. ...
7 jasiirado qalaad oo Nusa Tengara. Indooniisiya
7 jasiirado qalaad oo Nusa Tenggara. Tusmada Tusmada Indonesia Boqolaal jasiiradood oo ku fidsan bariga Bali waxaa si wada jir ah loogu yaqaan Nusa Tenggara, oo ah gobol ku yaal bariga Indonesia oo noqda meel caan ku ah safarka. Jasiiradaha qaar waxay ku faanaan isla qurux qurux badan oo soo jiidata martida deriskooda Balinese ...
25.09.2020 / Rem / Aasiya, Indonesia, Safarka Bali / Faallooyinka duubista 7 jasiiradood oo qalaad oo Nusa Tengara. Indooniisiya no
10 jasiiradaha ugu quruxda badan ee ku dhow Bali
10 Jasiiradaha Ugu Quruxda Badan Bulaalka U Dhow Bali Tusmada Mawduuca Bali, oo sidoo kale loo yaqaan Jasiiradda Gods, waa halka ugu caansan ee loo safro Indonesia. Marka la isku daro taariikhda cajiibka ah iyo dhaqanka ruuxiga ah ee qalaad, Bali waxbaa u ah qofkasta oo booqda. Iyo tan ugu muhiimsan, jasiiraddu runtii waa qurux badan tahay, waxay leedahay wax kasta oo ...
25.09.2020 / Rem / Aasiya, Indonesia, Safarka Bali / Faallooyinka on 10 jasiiradaha ugu quruxda badan agagaarka Bali no
10ka Huteel ee ugu Fiican Bali
10ka Huteel ee ugu sareeya Bali Shaxda Mawduucyada Bali shaki la’aan waa xulashada ugufiican ee hoy ee Indonesia.Hoteellada miisaaniyada badankood ee jasiiradda waxaa lagahelaa Kuta, halkaas oo ah halka dalxiisayaasha badankood aadaan.Si kastaba ha noqotee, liiskan waxaa kujira meelaha raaxada ee ugu wanaagsan Bali sida lagu qiimeeyo martida. waxay ku urursan yihiin Nusa Dua, Seminyak iyo Ubud. Hotelada Ubud iyo meelaha loo dalxiis tago waxay ku habboon yihiin ...
24.09.2020 / Rem / Aasiya, Indonesia, Safarka Bali / Faallooyinka 10ka huteel ee ugu wanaagsan Bali no
Safarkayaga Bali Day 1 Imaanshaha Denpasar abbaaraha 2 pm. Hoteelkeenna Bali Hyatt wuxuu noo soo diray taksi wata darawal aad u saaxiibtinnimo 🙂 waxaanna u aadnay Sanur illaa nus saac .. ilaa Bali Hyatt. Waxaan isla markiiba jeclaanay Sanur ... iyo guryahan qurxoon iyo, dabcan, jawiga wanaagsan ee Bali ...
11.09.2020 / Angel / Aasiya, Safarka Bali, Dib u eegis daacad ah / Faallooyinka 3 Safarkayagii Bali
26.11.2020 / Rem / Greece, Xaqiiqooyin xiiso leh / Faallooyinka on 7 yaababkii Giriiggii hore no
8 taallo ee dunida ugu waaweyn
8da taallo ee ugu waawayn adduunka Shaxda waxyaabaha ku jira Taallo waawayn ayaa la dhisay ilaa wakhtiyadii hore. Great Sphinx, oo ay dhisteen Masaaridii hore ee Boqortooyadii Hore, dhererkiisu waa 20 mitir (66,34) welina wuxuu weli ka mid yahay taallooyinka ugu waaweyn adduunka. 30-kii sano ee la soo dhaafay, adduunku wuxuu markhaati ka ahaa dhismaha weligiis ka sii weynaa ...
17.10.2020 / Rem / Xaqiiqooyin xiiso leh / Faallooyinka on 8 taallo ugu weyn adduunka no
Baro godadka Ellora ee Hindiya
Soo hel Bogagga Godka Ellora ee Hindiya Shaxda Tusmada Ellora Caves waa mid ka mid ah dhismooyinka ugu waawayn adduunka, oo ku yaal 30 km (20 mayl) waqooyi-waqooyi-galbeed Aurangabad, oo u dhow tuulada Ellora ee Hindiya. Kuwa raacsan Buddhism, Hinduuga iyo Jainism waxay dhiseen dhismahan inta udhaxeysa qarniyadii lixaad iyo tobnaad ee ...
12.10.2020 / Rem / Aasiya, India, Xiiso leh, Xaqiiqooyin xiiso leh / 1 Comment Duubista Soo hel boholaha Ellora ee Hindiya ku yaal
02.10.2020 / Rem / Caqli, Xaqiiqooyin xiiso leh, Woqooyiga Ameerika / 1 Comment Kaga tag 10ka Dalxiis ee Dalxiis ee Belize
10 xeebaha ugu fiican Spain
Jadwalka Xeebaha ee 10ka ugu sarreeya Spain Meel caan ah oo loo tago Yurub, Spain waxay caan ku tahay dhaqankeeda hodanka ah iyo muuqaal dabiici ah oo qurux badan. Xeebaheeda waxay soo jiitaan dalxiisayaasha doonaya inay waqti ku qaataan nasashada qorraxda xilliyada ay fasaxa xagaaga aadayaan Xeebaha Spain oo leh tiro xeebo iyo muuqaal qurxoon ayaa u kala duwan sida quruxda badan Xeebaha mashquulka badan ...
30.09.2020 / Rem / Yurub, Xaqiiqooyin xiiso leh, Spain, Xeebaha, Safarka Yurub / Faallooyinka on 10 xeebta ugu fiican Spain no
6 aragtiyo cabsi leh oo ku taal Faransiiska
6 ka mid ah Soojiidashada Creepiest ee Faransiiska Tusmada Tusmada Dadka waxaa loo jiiday xeebta quruxda badan ee Faransiiska sababo badan awgood. Magaalada nalalka iyo halyeeyga Eiffel Tower ayaa soo jiitay malaayiin dad ah quruxdooda. Qaar ka mid ah astaamaha caanka ah ee Faransiiska ayaa si fiican loo yaqaan, laakiin dhinaca weirder. Haddii aad raadineyso wax ka baxsan waddada la garaacay, booqo qaar ka mid ah aragtida gurguurta ...
29.09.2020 / Rem / Yurub, Meelaha Eerie, Xaqiiqooyin xiiso leh, Safarka Yurub, France / 1 Comment 6 ee meelaha ugu xiisaha badan Faransiiska
Dib u eegis daacad ah
Qof walba been buu sheegayaa
Sida ay noo khiyaaneeyaan waxaan rabaa inaan la wadaago waayo aragnimadayda ku saabsan isticmaalka dib u eegista isku soo duubista hudheelka hudheelka, iyo sidoo kale adeegga dib u eegista Google. Waa tan sida ay ahayd. Jiilaalkan (2020), waxaan u duulay Sri Lanka, oo waxaan degay huteel horay loo sii ballansaday. Huteelka ayaa si taxaddar leh loo xushay iyadoo lagu saleynayo dib u eegista, sawirrada, iyo qiyaasaha la filayo martida dhabta ah. Macluumaadkan waxaa laga helay ...
12.09.2020 / Roomaan / Aasiya, Без рубрики, Hudheelada, Dib u eegis daacad ah / 6 faallooyinka on Qof walba been ayuu sheegayaa
Lama helin diiwaanka.
4-ta jasiiradood ee ugu quruxda badan Sporades. Griiga
13 gobolada ugu quruxda badan Griiga
11 jasiiradaha ugu quruxda badan ee Dodecanese Griiga
10 xeebood ee ugu wanaagsan Giriigga
7da jasiiradood ee Ioniyaanka ugu quruxda badan Griiga
Top 10 Waxyaabaha Lagu Sameeyo Santorini Greece
Qasriga Cajiibka ah ee Knossos ee jasiiradda Crete ee Giriigga
10 indhaha xiisaha leh ee Crete Griiga
10-ka soojiidasho wanaagsan ee Tesaloniki Griiga
10 indhaha ugu xiisaha badan ee Peloponnese Griiga
8 jasiirado caan ah oo u dhow Athens Griiga
Soojiidashada sare ee 10 ee Mykonos Griiga
10 soojiidashada ugu caansan ee Corfu Griiga
10-ka ugu wanaagsan ee soo jiidashada Rhodes Griiga
6 monasteries cajiib ah oo ku yaal Meteora Griiga
10-ka soojiidasho wanaagsan ee Milan Talyaaniga
Top 10 Meelaha Fasaxa ee Griiga
10 goobo xiiso leh oo ku yaal Zermatt Switzerland
10-ka soojiidasho wanaagsan ee Bern Switzerland
10 meelaha ugu fiican ee lagu booqdo Switzerland
10 xeebaha ugu fiican Indonesia
12 volcanoes-ka ugu yaabka badan Indonesia
8 gobolada ugu xiisaha badan ee Indonesia
12 meelood oo ku yaal Dnipro (Dnipropetrovsk) oo ay tahay inaadan seegin Yukreeniyaan
12 soo jiidashada xiisaha leh ee Rotorua New Zealand
12 jiidashada Auckland New Zealand
14 magaalooyin qurux badan oo ku yaal New Zealand
12 magaalooyinka ugu xiisaha badan New Zealand
8 volcanoes-ka ugu yaabka badan New Zealand
Khariidadaha dalka dalxiiska
Khariidadaha is-dhexgalka ee dalalka adduunka
Isbarasho khariidadaha dalka, oo leh goobo dalxiis oo la tilmaamay iyo waxyaabo kale oo xiiso leh oo muhiim ah. Khariidaduhu si buuxda ayey is dhexgal u yihiin, waxaa ku jira sawirro iyo sharraxaadda soojiidashada, taageerada raadinta smart, kala-soocidda SERP iyo hagitaan buuxa... Soo-booqdayaasha ka diiwaangashan goobta waxay marin u helayaan kaararka ka shaqeynaya horumarsan - ku darista astaamahaaga, socodka, jidadka iyo inbadan. Sidoo kale meesha aad ku jirto khariidadaha dayax gacmeedka, kor u qaadista iyo khariidadaha gargaarka, iyo khariidado hawleed shaqeynaya oo leh taageero saadaalin.
U adeegso si raaxo leh!
Khariidada ayaa socota, fadlan sug ...
Wax walba oo ku saabsan Thailand
Khariidadda Guud ee Soojiidashada Thailand
Wax walba oo ku saabsan Sri Lanka
Gobollada iyo dalxiisyada Sri Lanka
Khariidadda cimilada Sri Lanka
Bali. Khariidadaha is-dhexgalka ee jiidashada iyo xeebaha
Java. Khariidadaha is-dhexgalka ee jiidashada iyo xeebaha
All ku saabsan Vietnam
Khariidadda guud ee jiidashada iyo xeebaha
Khariidadda cimilada Vietnam
Khariidadda guud ee soojiidashada iyo xeebaha Singapore
Khariidada cimilada ee Singapore
Dhamaan waxa ku saabsan Singapore
Khariidadda guud ee soojiidashada iyo xeebaha Hindiya
Khariidadda hawadda ee Hindiya + saadaasha
Talooyin muhiim ah oo loogu talagalay musaafiriinta. Qasaarooyinka nolosha
Faa’iidooyinka iyo qasaaraha. Cirka, Badda, Tareenka, Gawaarida ...
Sida loo badbaadiyo safarka hawada
Xeerarka Hawada Hawada
Doorashada hudheel. Talooyin
Waxa aan la iloobin safarka
Waxaan u ururinnaa shandado si sax ah
Masuuliyada shirkadaha diyaaradaha. Xad-dhaaf. Diyaaradda
Waxaan la safraynaa carruurta
Safarka ayaan ku kasbanaa safarka
Barnaamijyada Lacag Qaadashada Sawirka
Maqaallo cusub oo ku yaal bogga hore
14.11.2020 / Faallooyinka doonta dalxiis ee webiga no
Xeebta qarsoodiga ah. Xeebta Tugel ee Bali
26.10.2020 / Faallooyinka Xeebta Sirta. Xeebta Tugel ee Bali no
Xeebta Sanur ee Bali. Indooniisiya
25.10.2020 / Faallooyinka Xeebta Sanur ee Bali. Indooniisiya no
Xeebta Pandawa ee Bukit. Bali
25.10.2020 / Faallooyinka xeebta Pandawa ee Bukit. Bali no
Xeebta Padang Padang ee Bali. Indooniisiya
25.10.2020 / Faallooyinka xeebta Padang Padang ee Bali. Indooniisiya no
Xeebta Mushroom. Jasiiradda Lenbongan. Bali
22.10.2020 / Faallooyinka Xeebta Mushroom. Jasiiradda Lenbongan. Bali no
Xeebta Lembeng ee Bali. Indooniisiya
22.10.2020 / Faallooyinka Xeebta Lembeng ee Bali. Indooniisiya no
Wadamada caanka ah
Jasiiradda Nusa Cheningan, Bali. Indooniisiya
Jasiiradda Menjangan ee ku taal Bali. Indooniisiya
Jasiiradda Nusa Lembongan. Bali. Indooniisiya
Jasiiradda Nusa Penida. Bali. Indooniisiya
Kuleylka barafka ah
Dhacdooyin - safarro
Booqashada Gastronomic iyo khamriga
Dalxiiska Badda dheer
Daaweynta iyo Caafimaadka
Raadin. Cirka iyo Hotelada
Diiwaangelinta bogga Journey-assist.com
Miyaanay ahayn waqtigii aannu u safrin lahayn ?! ;)
Tilmaamo waxtar leh!
Add Journey-Assist gurigaaga!
Subaxii markii uu hurday hurdo aan nasasho lahayn, Gregor Zamza waxa uu ogaaday in uu isu beddelay cayayaan xun oo sariirtiisa ku jiifa.
Qariidada ayaa furanaysa, fadlan sug ...